🥇 ▷ iPhone 11: Dallac USB-C ah ayaa lagu dari lahaa ✅
iPhone 11: Dallac USB-C ah ayaa lagu dari lahaa
IPad 11 waxaa lagu iibin doonaa caariyaha USB-C oo ku jira sanduuqa. Isticmaalayaashu waxay awoodi doonaan inay ku raaxaystaan ​​dalabka degdegga ah iyagoon iibsan wax xamaar kale. Waa inuu la socdo USB USB-C ilaa Hillaac sababtoo ah haa, dhammaan seddexda moodel waa inay xajistaan ​​dekeda hillaaca.
Tani waxay horay u soo jeedisay warbixinadii hore, iPhone 11 waa in lagu suuq galiyaa cajiinka USB-C oo lagu daro sanduuqa, wuxuu hubiyaa ChargerLAB, kaas oo haya macluumaad ka yimid ilo lagu kalsoon yahay oo garanaya “jir weyn oo lagu meeleeyay Apple”. Tani waa isbedel istiraatiijiyadeed oo weyn tan iyo markii shirkadda Cupertino muddo dheer lagu dhalleeceynayay inay bixiso aallad aad u aan habeyn (USB-A 5W) ay leedahay iPhone, oo aan u oggolaaneynin inay ka faa’iideysato dallacaadda dhakhsaha leh ee aaladeeda.
iPhone 11: deked hillaac ah laakiin cawiyaar USB-C ah
Laakiin sida la filayay, jiritaanka markabkan qaaliga ah micnaheedu maahan in jiilka xiga ee iPhone ay ka faa’iideysan doonaan dekada USB-C. Seddexda moodel ee iPhone 11 waxay had iyo jeer markab ku rari doonaan deked hillaac ah oo ay ku dallacayaan. Apple waxay u dhaqaaqi kartaa UBS-C moobiilkeeda laga bilaabo 2020. Laakiin waqtigaas, sidaa darteed waa USB-C si loo yaqaan ‘Lightning cable’ kaasoo xiri doona farqiga u dhexeeya sanadkaan ‘iPhone’ iyo cajiinka. Waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad ku xirato iPhone-kaaga moodelkii ugu dambeeyay ee “Mac” oo leh dekedaha USB-C adigoon u baahnayn inaad adigu iskaa u iibsato.
Sidoo kale akhri: iPhone 11, XI (2019): wax walba oo aan ka ognahay taleefanka casriga ee Apple
Apple waa inay soo bandhigto iPhone 11keeda Sebtembar 10, 2019, marka aan gogol xaaridoono keydka macluumaadka aaladaha iyo waxyaabaha kujira. Amarada horudhaca ah ayaa markaa ka dib la bilaabi doonaa bisha Sebtember 13, 2019 si bixitaanka bisha Sebtember 20, hordhac, kacdoon la qorsheeyay ma jiro. Haddii loo eego waxqabadka ama naqshadeynta, Apple waa inuu bixiyaa oo keliya noocyo hagaagsan oo iPhone XR, XS iyo XS Max.
IPad 11 wuxuu la imaan doonaa USB-C lacag. pic.twitter.com/FqYgAHJnqx
– LoadLAB (@chargerlab) Ogast 20, 2019